Axad, Abriil 19, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Akhristayaasha joogtada ah ee balooggaygu way ogyihiin inaan waligay ahaa u dooda cabirka. Xirfad ku saabsan suuqgeynta keydka macluumaadka waxay indhahayga u furtay awoodda xogta iyo awooddeeda ay si sax ah uga caawiso dadaallada suuqgeynta. Ka qaybgalka Webtrends Hawlgal 2009 Shirka waxay ahayd dhiirigalin runtiina waxay i gelisay saliibi si aan u hubiyo shirkadaha inay cabiraan oo ay falanqeeyaan istaraatiijiyadooda suuq geynta internetka.
Webtrends la marti qaaday Ian Ayres inuu ka hadlo buugiisa, Super Crunchers. Waxaan munaasabadda ku helay buug la duubay oo aan ku bilaabay akhrinta diyaaradda. Waxaan ku dhibtooday inaan hoos u dhigo tan iyo!
Waxaan u maleynayaa in dulucda guud ee buugga lagu soo koobi karo weedh keliya:
Waxaan aragnaa halganka caqliga, khibrada shaqsiyadeed, iyo rabitaanka falsafada oo dagaal kula jira xoogaga tirada.
Ayres wuxuu bixiyaa tusaalooyin midabbo leh oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee daawada, dowladda, waxbarashada, warshadaha filimada… iyo xitaa xulashada khamriga… si loo taageero tirinta tirada. Tusaalooyinka oo dhami waxay taageerayaan fikirka ah in xog ururinta iyo falanqaynta dhammaystiran (iyadoo xoogaa fiiro gaar ah loo lafa gurayo falanqaynta) ay na siin karto aqoon si loo hagaajiyo oo xitaa loo saadaaliyo natiijooyinka ganacsiga.
Xitaa haddii aadan taageere u ahayn falanqaynta, tani waa buug weyn oo ganacsade kasta ama suuqgeeye u leeyahay inuu soo qaato.
Apr 21, 2009 at 9: 23 PM
Waxaan nus dhex marayaa buuggan aniga lafteyda. Waad dhimatay oo waad nasiib badnayd inaad maqashay isagoo hadlaya. Waxaan u adeegsanayaa fikradaha inaan ku dhiirrigeliyo habab ka wanaagsan oo aan ku sameeyo shaqada shaqaalaha (ka fakar suuq geynta gudaha "alaabta" ee magdhowga iyo dheefaha).
Waad ku mahadsantahay qoraal weyn.
Apr 21, 2009 at 11: 58 PM
Mahadsanid Bill! Si aan runta kuugu sheego, buugga waan ka helay wax ka badan soo bandhigidda! Waxaan u maleynayaa in gaajadiisa xogta falanqaynta ay aad ugu muuqato qoraalka Mr. Ayres.